(26.2.2020 to 3.3.2020) မိတ်ဆွေတို့ ချိန်ဆနိုင်ရန် တစ်ပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်း -
HomeKNOWLEDGE(26.2.2020 to 3.3.2020) မိတ်ဆွေတို့ ချိန်ဆနိုင်ရန် တစ်ပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်း
February 26, 2020 Alinn Pya KNOWLEDGE Comments Off on (26.2.2020 to 3.3.2020) မိတ်ဆွေတို့ ချိန်ဆနိုင်ရန် တစ်ပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်း
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့မှ မတ်လ ၃ ရက်နေ့အထိ ကံ ဉာဏ် ဝီရိယ သုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင် ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေသော် ….
(၇) ရက် သား သမီးအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ….။
(26.2.2020 to 3.3.2020) မိတ္ေဆြတို႔ ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္ တစ္ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔အထိ ကံ ဉာဏ္ ဝီရိယ သုံးခ်က္လုံးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏိုင္ၾကပါေစေသာ္ ….
(၇) ရက္ သား သမီးအားလုံး က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ….။
ယောက်ျားအများစု ရှိန်ကြတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ အမူအကျင့်များ
အခုခေတ်လူငယ်တွေ မသိတော့တဲ့ ၃ ပျောက်လို့ ၅ကွယ် ၆ရွာနဲ့လွဲ ပျိုတိို့မောင် ရွှေရောင်လွဲတယ် ၄ရွာက ဆွဲ ရဲ့ အဓိပ္ပါယ််
ဝမ်းဗိုက်ကအဆီကျစေပြီး ခါးသွယ်စေမယ့် (၉) မိနစ်စာ လေ့ကျင့်ခန်း
ငါးရက် အတွင်း ပွေး ညှင်း တင်းတိတ် ဝက်ခြံ သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့နည်း
အဆီကြောင့် ဝနေသူများအတွက် အဆီကျစေတဲ့ ကြက်သွန်နီသုပ်
မင်္ဂလာပါနော်။ အမျိုးသမီးတိုင်း သေးသွယ်တဲ့ ခါးလေးကို လိုချင်ကြပါတယ်။ ဝမ်းဗိုက်မှာ အဆီတွေ စုနေတာမျိုးကို အားလုံးက မလိုချင်ကြပါဘူး။ ဒီတခါမှာတော့ ဝမ်းဗိုက်က အဆီကိုကျစေပြီး သင့်ကို ခါးသေးသွယ် လှပစေမယ့် (၉) မိနစ်စာ လေ့ကျင့်ခန်းကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘာက ထိရောက်မှုရှိစေသလဲ သင့်ခါးကို အဓိက တုတ်စေတာ ခါးမှာ အဆီစုစေတာဟာ ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာခြင်း ကိုယ်ဟန်အနေအထား မမှန်ခြင်း ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်မစားခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ် မိမိမလုပ်နိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်ခြင်း […]
ပွေး၊ ညှင်း၊ တင်းတိတ်၊ ဝက်ခြံ ဖု မပေါက်ဖူးတဲ့သူမရှိပါဘူး ပေါက်ဖူးတဲ့ သူတွေပါပဲ။ စိုးရိမ်စရာ ရောဂါ အနာ မဟုတ်ပေမယ့် မျက်နာ ပေါ်မှာ အပေါက် များတဲ့ ရောဂါ တွေဖြစ်လို့ အလှပျက်၊ မျက်နာ ပြရခက်ပါတယ်။ ငါးရက် အတွင်း သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ လိမ်ဆေး လိမ်းကြည့်ပါ။ ဆေးဖော် ဖို့ကလည်း အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ ဆေးနည်းမှာ- ကြက်သွန်နီ ဥသေးတစ်လုံးကို အခွံနွာပြီး ညက်အောင်ထောင်းပါ။ […]
၁။ ရေအေးနဲ့ ထမင်း ထမင်းစားရင်း ရေသောက်လေ့ရှိသူတွေကို မြင်ဖူးကြမှာပါ။ တချို့က အစာစားရင်း ရေသောက်ရင် အစာပိုကြေလွယ်မယ်လို့ထင်ကြတယ်။ ဒါက တကယ်တော့မမှန်ပါဘူး။ ထမင်းစားရင်း ရေသောက်မိရင် မိမိစားထားတဲ့ အစာက ရေနဲ့ ရောထွေးသွားပြီး အူလမ်းကြောင်းမှာ အစိုင်အခဲအဖြစ် ကျန်ရှိနေမှာပါ။ ဒါက အစာချေဖျက်မှုကို နှောင့်နှေးစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို မအီမသာဖြစ်စေပါတယ်။ ၂။ သခွားသီးနဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး သခွားသီးမှာ ပါတဲ့ enzyme(အန်ဇိုင်း) တစ်မျိုးဟာ ခရမ်းချဉ်သီးမှာပါတဲ့ ဗီတာမင် […]
ကြက်သွန်နီကို ဟင်းချက်နည်းမျိုးစုံအတွက် အသုံးပြုပြီး စားသုံးနေကြပါတယ်။ ချက်ပုံနဲ့စားပုံများ မတူညီကြသလို သူ့ရဲ့အကျိုးပေအာနိသင်ကလည်း ကွဲပြားကြပါတယ်။ ယခုဖော်ပြပေးမည့် နည်းလေးကတော့ ကြက်သွန်နီကို အဆီကျဆေးအဖြစ် အစိမ်းသုပ်စားရတဲ့ စားသုံးနည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ MLA102634SALAD (၁) ကြက်သွန်နီကို ပါးပါးလှီး၍ ပန်းကန်ထဲ ထည့်ပါ။ (၂) သံပုရာသီး ညှစ်ထည့်ပါ။ အနံ့ပြင်း၍ စပ်နေသော ကြက်သွန်နီကို သံပုရာသီးအချဉ် ညှစ်ထည့်လိုက်ပါက အချိုဓါတ်သို့ ပြောင်းသွားစေပါသည်။ (၃) သခွါးသီး ထည့်လိုပါက (အနည်းငယ်မျှ) […]